musha Africa Trevor Noah Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Trevor Noah Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Vasikana, Mararamiro, Net Kukosha, uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, ichi Chinyorwa cheHupenyu chemudhi weSouth Africa. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Iwe unogona kunge uchiziva Trevor Noah semunhu anonakidza simira-up comic, kana pamwe semunyori anotengesa zvakanyanya. Iva akafuridzirwa paunotevera kuburikidza nehupenyu hwake nyaya.
Trevor Noah Nyaya Yehucheche:
Trevor Noah akaberekwa musi wa20 Kukadzi 1984, mumusha weSoweto weJohannesburg Metropolitan Municipality muSouth Africa kuna amai vatema vekuSouth Africa uye nevachena baba veEurope.
Kubatana kwavo kwanga kusiri pamutemo sezvo nyika yakavigwa pakati pehutongerwe enyika panguva iyoyo. Vabereki vaNoa vakaedza kuchengetedza hukama hwavo pachivande.
Zvakangodaro, amai vake vaizotarisana nenguva yejere uye faindi muhudiki hwake achiri mudiki Noa akavanda kubva kuzviremera.
Kwaive kutonga uko kudzvanyirira kwerudzi uye rusarura kwaive kurongeka kwezuva. Kudzvinyirira kwerudzi kwaive kuparadza, rusarura tsika iyo Nelson Mandela vakarwa nesimba.
Zvinoenderana nehurongwa hwehutongerwe enyika, Noah aive 'akara'. Pane imwe nguva, amai vake vaizomukanda kunze kwemotokari yekutengesa nekuti aifunga kuti mutyairi, anobva kurudzi rweSouth Africa, anga achimuuraya.
Aigara achinzwa kunetsekana mukati nekuti yaive mhosva kuzvarwa semucheche wemusanganiswa. Paaive paruzhinji, amai vaNoa vaizoita senge vasiri amai vake kuti vasasungwe.
Nekuda kweizvozvo kuita kuti Noa agare achivhiringidzika uye achipokana nenharaunda yake mumakore ake ese ekukura.
Vezera raNoa vakacherechedzawo kuti aigona kutaura mitauro yakati wandei achiteedzera, kutevedzera maaccents zvisingaite, uye aine tarisiro huru pabasa rake.
Trevor Noah Mhuri Yemhuri:
Ipo baba vaTrevor vaigara zvakanaka munharaunda yakanaka yeJohannesburg, Trevor akakurira nemhuri yamai vake mutown town inosiririsa yeSoweto; nekuti amai vake vakaomerwa nekuchengeta iye ega. Amai Vake Vakuru, Nomalizo Frances Noah, akamusimudza.
Vakasangana nourombo hwakadzama vasina kana chinhu kunze kwetariro yeramangwana riri nani.
Trevor Noah Mhuri Dzinobva:
Amai vaNoa, Patricia, mutema wechiXhosa, chizvarwa chemuSouth Africa chizvarwa chechiJuda apo Baba vake, Robert Noah, vachena vekuEurope vanobva kuSwitzerland neGerman; kugadzira Noa hunhu hwemarudzi mazhinji. Haana kutarisa zvachose saamai vake vane ganda rakasviba naambuya, uye saka vavakidzani vakagutsikana kuti aive mwana weumwe munhu.
Trevor Noah ari polyglot; Anotaura mitauro matanhatu (6) kusvika sere (8) inosanganisira Chirungu, ChiGerman, Chixhosa, Chizungu, Sotho neAfrikana.
Trevor Noah Dzidzo:
Kupinda zvikoro zvakasiyana kwakapa Noa zviitiko zvakasiyana zvedzidzo; kunyanya mukuwadzana nemapoka akasiyana evanhu.
Pakapera rusaruro kuburikidza nebasa raAmai vake, Trevor Noah akakwanisa kuenda kune yakasarudzika, yakasarudzika Chikoro cheKaturike (Maryland College Primary Chikoro). Chikoro ichi chaive nevana vaive vatema, vachena maIndia, uye makara.
Trevor Noah Prankster:
Noa ainakidzwa nekuita hutsinye uye kudhirowa pranks pane vamwe. Dzimwe nguva, aigona kutodhira pranks pachikoro chake chose. Pane imwe nguva, akabvisa magirazi ose anokudza kubva kune vanodzidza mukirasi.
Trevor Noah Akadzingwa:
Dzidzo yake yanga isingawanzo kuve yakajeka chiitiko. Noah aifanira kudzingwa pachikoro cheKaturike nekuunza banga rekuzvidzivirira kune vanodheerera. Zvisinei, iyo yakanga isiri mhosva yake yekutanga. Noa aifanira kurangwa kazhinji achiri muchikoro cheKaturike.
Noa haana kuita hanya nekudzingwa. Mai vake vakamudzidzisa kubvunza masimba, uye akazviita nechido. Akaona chikoro cheKatorike sechipokoreti chesaruraganda: yakanyatsotevedzera mitemo uye simba rakavakirwa pakunyorwa.
Noah Anochinja Zvikoro:
Mushure megiredhi rechitanhatu, Noah akachinja zvikoro, achienda kuchikoro chehurumende panzvimbo. Kaive kekutanga kuona kuti vanhu vanogona kutora nzvimbo imwechete uye vasave pamwechete.
Vana vachena vaitamba pamwechete. Vana vatema vaitamba pamwechete. Uye ndipo paive naNowa, pakati pasina boka.
Mumwe mwana wechiIndia kubva mukirasi yake akanzwira tsitsi Noa uye akashamwaridzana naye. Akaenda naye kumativi akasiyana evatema uye akaita kuti ataure mitauro yavo.
Vadzidzi vatema vaida kuziva kuti akaziva sei marimi avo, uye Noah akati imhaka yekuti aive mutema.
Trevor Noah High Chikoro:
Noah akatanga giredhi rechisere kuSandringham High School, chikoro chakasangana nemarudzi akasiyana siyana uye achimhanya senge charter chikoro muAmerica.
Chikoro ichi chaive chikuru uye chaimiririra marudzi ese eSouth Africa. Akanyanya kuswera pamwe chete nevarombo vatema vadzidzi, asi haana kumbovaona kunze kwechikoro.
Trevor Noah Basa Rinosimbisa Kuvaka:
Kunyangwe zvaakasangana nazvo zvinoshungurudza, Noah aigona kuwana utiziro mumhanzi uye kuita achiri mudiki. Akange aine chinzvimbo chakakura uye akawana yake yekutanga terevhizheni pane yekuSouth Africa sipo opera achiri mudiki.
Zvimwe zvezviitiko zvake zvichikura zvaizove nyaya yebasa raNowa rekunyora, raizotarisisa maitiro ehunhu wenyika yake. Vezera raNoa vakacherekedza kuti mutambi wechidiki uyu aive nezvinangwa zvikuru zvebasa rake.
Trevor Noah Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Kutamba chinzvimbo chidiki muchikamu chechimwe chirongwa chemuSouth Africa TV chinonzi 'Isidingo,' kwakaona kutanga kweNoah Career pazera remakore gumi nemasere (18). Kutevera, kwaive kuitiswa kwake redhiyo-yakanangana neredhiyo show yakanzi 'Noa Areka' paYFM.
Noa akaenderera mberi nekutambira yeTV yekutevedzana 'Mhanya Iyo Mutsa' paSABC 2 kubva muna2004 kusvika 2006. Pasina nguva refu, akashanda semavhidhiyo mashoma mamwe maTV uye mutambo wetsiva. Akazopedzisira atora TV yake yainzi Tonight naTrevor Noah.
Muhupenyu hwake hwese, akaenderera mberi achizvisarudzira. Hunyanzvi hwake uye tarenda rakatumbuka, uye Noa akazove mumwe wevanotungamira manhamba ekumira-kumusoro munyika yake. Muna 2011, akatamira kuUnited States.
Trevor Noah Biography - Kumuka Mukurumbira:
Achisvika chiitiko chitsva muhupenyu hwake hwekuseka, Noah akasimuka wekutanga muSouth Africa, anomira pamutambo weTonight Show, Jay Leno 6th yaJanuary 2012 uye kuenda mberi kubata zvakafanana musarudzike paLate Show ne David Letterman gore rakatevera, 17 Chivabvu 2013.
Pakupera kwa2014, akaita kekutanga kuratidzika semubatsiri weThe Daily Show naJon Stewart. Nguva pfupi yapfuura, aifanira kutsiva Jon Stewart semutungamiriri weThe Daily Show. Akakunda mibairo yakawanda yebasa rake pashoo kubva paakatora nzvimbo.
Noah aifanirwa kusarudzwa kuti ave Primetime Emmy Award muna 2017. Akaita zvese muSouth Africa yake yekunyika seanomhanyisa mune zviitiko uye zvirongwa. Zvakare kushanyira muUnited States uye kune dzimwe nyika zvakare.
Trevor Noah ane musikana here? Mukadzi? Chero akakosha ?:
Mhinduro yemibvunzo iyi yakaoma zvishoma, asi isu tinovimbisa kukubatsira kuiputsa.
Asati abva muSouth Africa, Trevor Noah aive muhukama naDani Gabriel. Vakatanga kufambidzana mu2014 uye panguva, asi vakaenda nenzira dzakasiyana nekuda kwehupenyu hwabatikana hwaTrevor.
Muna 2015, Trevor Noah akatanga kufambidzana nemumwe mukadzi, Jordyn Taylor, zvaiita sekunge iwo waive mutambo wakanaka kune vazhinji. Nehurombo, muna 2018, Jordyn nehukama hwaNoa vakaguma.
Kubva munaGunyana 2020, FoxNews yakashuma kuti Trevor Noah uye Minka Kelly vari muhukama 'hwakakomba' uye vese vanonzi vari kugara pamwe chete.
Trevor Noah Musikana, Danieri:
Dani Gabriel inyanzvi inobudirira yekudzidzira physiotherapist. Akatsigira kubudirira kwaNoa uye aifamba achitenderera naTrevor chero nguva paaive parwendo.
Shiri mbiri dzerudo dzakaratidzika kunge dzaifara uye dzichinakidzwa. Pasinei nekuparadzaniswa, maererano nesocial media yake, Gabriel anoramba achifarira kubudirira kwake.
Trevor Noah Musikana, Jordyn Taylor:
Kubva pamabasa aTrevor Noah naJordyn Taylor, vese vari vaviri vaitaridza kunge mutambo wakakwana.
Trevor hwaive hukama hwekutanga hwakakomba hwaJordyn kubva paakarasikirwa nemudiwa wake Vin Giuliano. Iye ane tarenda modhi uye muimbi, aine akati wandei misoro yenyaya achikwenya muMimhanzi Chati.
Iye zvakare mutengesi wezvivakwa ane mambure akakosha anofungidzirwa kunge angangoita mamirioni maviri emadhora; sosi yake yekutanga yemari iri kuimba.
Trevor akatomboendesa Jordyn kunzvimbo yake yekuSouth Africa kunosangana naamai vake, vanin'ina naambuya. Zvikonzero zvekurambana hazvizivikanwe, asi sekureva kwaTaylor, anoda Trevor zvakanyanya.
Trevor anonzi parizvino anogara mufurati rine mbiri-mbiri muHell's Kitchen yeNew York; Taundi rekumusha kwaJordyn kwaari kuitisa "Mazuva ese Kuratidzwa" kwenguva yehutachiona hweCorona Virus. Isu tinoita kunhuhwirira chinhu chiraura.
Trevor Noah akaroora here?
Kubva Jordyn Taylor, Trevor Noah akagara pachena asina kuroora, achizviita iye anonyanya kukodzera bachelor.
Mubvunzurudzo paThe Howard Stern Show, Trevor Noah akavhura pamaonero ake erudo nemuchato, achigovana kuti haapikisane newanano, anongopesana nekugara pamwe chete.
Muna Nyamavhuvhu 2019, zvinonzi mutambi uyu akange ashandisa madhora makumi maviri emadhora paBel-Air bachelor pad (imba yevachelors).
Maonero ake akasiyana anopa imwe nzwisiso muchisarudzo chake chekuramba ari bhachura. Kunyangwe iye asina kugadzirira kugovana hupenyu hwake nemumwe munhu parizvino, haasi kuita chibvumirano parufaro rwake futi.
Trevor Noah Hupenyu Hwemhuri:
Kunyangwe mhuri yake isiri iyo yakajairwa mamiriro emhuri iyo nharaunda inoenderana nayo; nababa, amai, nevana.
Trevor Noah angati huzhinji hwehupenyu hwake hwaive uye achiri kufurirwa nehunhu hwakaiswa maari nevabereki vake. Kunyanya gogo vake, avo vakamurera zvisingaite kunyangwe vachida zvakanyanya zviwanikwa.
Zvizhinji Nezve Trevor's Noah Baba:
Robert Noah, anova baba vaTrevor, aive aripo muhupenyu hwake kwenguva pfupi. Super Baba muchena weSwitzerland-wechiGerman, uyo aisatenderwa kuve nemwanakomana wake pazere veruzhinji nekuda kwehurongwa hwehutongerwe enyika muSouth Africa panguva iyoyo. Akaenda kuCape Town apo Trevor aingova nemakore gumi nematatu ekuberekwa, achirasikirwa nehukama naTrevor.
Trevor aizoti gare gare kuti kuenda kunzvimbo yababa vake kwainzwa kuda kuenda kuDisneyland uye kurasikirwa nekubata kwakamuremera.
Trevor akasanganazve nababa vake, mumakore ake ekutanga makumi maviri. Baba vake vakamuratidza kuti ane hanya nemwanakomana wake, achizviratidza nealbum. Iyo yekuunganidza yaive nezvakatemwa kubva mumapepanhau pamusoro pemakore zvichiratidza Trevor achitumbuka semutambi.
Zvizhinji Nezve Amai vaTrevor Noah:
Patricia Nombuyiselo Noah, Trevors Mum, chizvarwa chekuSouth Africa kubva kurudzi rweXhosa. Iye anotyisa mukadzi anonamata, akasindimara, asingatyi, uye anoshamisa mudzidzisi.
Akaenda nemwanakomana wake kumachechi, musangano wemunamato, kudzidza Bhaibheri uye kuchechi yevechidiki, kunyangwe vazhinji vatema vaivhunduka mudzimba dzavo.
Akazoroorwa nemutema weSouth Africa, Abel Shigange. Trevor anopa rukudzo kusimba raamai vake - uyo ane hunyanzvi hwekuvapo iye - mubhuku rakanzi, Akazvarwa Mhosva. Akadzidza zvakawanda kubva kuna "Gangster" Amai vake sezvaaizotaura Oprah Winfrey.
Zvimwe Zvizhinji nezvaTrevor Noah Amai Vahombe:
Nomalizo Frances Noah ndigogo vaTrevor. Ane vana vatatu (3) vana uye vapfumbamwe (9) vazukuru. Nomalizo akada kusimudza Trevor, uye anotaura nezvake nerudo rukuru muzwi rake. Iye ari pamudyandigere mushandi wefekitori, uye aigara Trevor nehama dzake pavanenge vachikura.
Zvizhinji Nezve Trevor Noah Baba Vokurera:
Baba vokurera vaTrevor Noah ndiAbel Ngisaveni Shigange. Aive makanika aive nemusangano. Kunyangwe aive akadzikama uye akananga kuwirirana, aigona kuita zvechisimba uye ane ngozi mukutsamwa. Aive nevana vaviri (2) vevana naamai vaTrevor.
Kuroora kwake kuna Patricia kwakashanduka kuvava, saka amai vaTrevor vakapfimbana muna 2009. Abel akaziva kuti aifanira kuzoroorwa nemumwe murume. Akazadzwa negodo, akaenda kumba kwaPatricia ndokumupfura kaviri, vanakomana vake vaviri varipo. Akasungwa ndokubvuma mhosva yake yekuedza kuponda mhosva.
Zvizhinji Nezve Trevor Noah Vanun'una:
Trevor Noah ane vakoma vaviri; Andrew naIsaka. Ivo vaviri vanakomana vaAbel Ngisaveni. Andrew akaita basa rakakosha kuponesa hupenyu hwaamai vake apo baba vavo vakamupfura.
Kuve nemakore gumi nemashanu ekuberekwa, amai pavakapfurwa nepfuti, vakatakura muviri wavo wainge uchimhanya neropa mumotokari ndokumumhanyisa kuchipatara kunyangwe aisaziva kutyaira zvakanaka.
Uku kufunga kwekukurumidza pachikamu chake kungave ndiko kwakaponesa amai vavo kubva murufu, anonyora Trevor mubhuku rake rekuhwina mubairo, 'Akazvarwa mhosva'.
Zvizhinji nezveHama dzaTrevor Noah:
Noa anofanira kunge aine Maiguru (ma) uye Babamunini (sekuru) kubvira sekuru vake vaine vana vatatu (3). Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nevatezvara vake, asi isu tinoziva kuti Trevor nehama dzake vaizogovana mubhedha pavaigara naamai vake mhuri.
Trevor Noah Hupenyu Hwega:
Kungodzokorodza zvishoma kubva pahupenyu hwehupenyu hwaNoa, tinosvika pakuona kuti anoda nhabvu uye mutsigiri mukuru weLiverpool. Anobvuma kukudzwa kwekusangana nemumwe wevatambi vake vaanofarira Mohamed Salah kuReds 'pre-mwaka yekugadzwa muNew Jersey mu2018.
Chimwe chaanofarira kuita kuita kuseka vanhu. Ari kushandira pasocial media uye ane huvepo hwakakosha pa Twitter (@trevornoah) uye Facebook. Iye anodawo kuteerera mimhanzi, achitora mifananidzo yaanowanzoisa pane vezvenhau.
Chikafu Chake Chaanofarira chinosanganisira Chikafu Chisiri cheMuriwo, nepo Dombo reYero neRome dziri nzvimbo yake yaanofarira. Bole uye Space cadet ndiwo ake aanofarira mavara. Anoda mota dzemitambo futi.
Trevor Noah Mararamiro:
Izvo zvinozivikanwa kuti uyo ane makore makumi maviri nematatu comedian, anotambira kubva pabasa rake reunyanzvi se Screenwriter, comedian uye TV Host. Nekuwana mari inoshamisa yeUS $ 36 miriyoni pagore, sekureva kwaForbes muna 28, Trevor Noah anga ari mutungamiriri wechina-anobhadharwa zvakanyanya munyika.
Ane mambure anofungidzirwa kunge mazana mana emamiriyoni emadhora emadhora eku America panguva yekunyorwa uku.
Nekuda kwake mota dzemitambo, Trevor Noah parizvino anotasva Lamborghini Aventador SVJ; inokosha $ 600000 US dollars.
Iye zvakare ane rake 10,044-mita-tsoka tsoka mumutengo Bel Aire yemari inokwenenzverwa $ 20.5 mamirioni emadhora US.
Kunyangwe hazvo parizvino achigara muUS $ 15,000 pamwedzi imba yemakamuri maviri yekurara muNew York's Hell's Kitchen, Manhattan kwaari kutambira "Daily Show" kwenguva yehutachiona hweCorona Virus.
Trevor Noah Mabhuku:
Noa ndiye munyori wememoir yataurwa pamusoro apa 'Akazvarwa Imhosva', ichave inogadzirwa seye firimu rinotamba naLupita Nyong'o.
Akanyora zvakare, bhuku rakanangana neSouth neSouthwest kumisikidza iyo zvakare yaive yakavakirwa pairi Mutungamiri Donald Trump's Twitter account.
Trevor Noa Philanthropy:
Muna 2018, Trevor Noah akatanga The Trevor Noah Foundation mukwavo Johannesburg.
Nheyo idzi dzinopa vechidiki vekuSouth Africa maturusi, hunyanzvi, uye nzira dzemukana unodiwa kuvandudza hupenyu hwavo uye kukurudzira shanduko munharaunda dzavanogara.
Munguva pfupi yapfuura, akapa mari yekubhadhara Mibato Yemakumi maviri neshanu (25) nhengo dzakasunganidzwa dze "The Daily Show" mukati megadziriro yekushambadzira yeindasitiri inokonzereswa neiyo coronavirus denda kudzamara kugadzirwa kwatanga zvakare.
Chitendero chaTrevor Noah:
Kunyangwe akakurira mumamiriro ezvinhu akaomarara, Noa akarerwa nesimba semukristu.
Kunyangwe amai vake vaizotendeukira kuchiJuda, apo Noah aive nemakore gumi nerimwe (11), haana kana kamwechete akaedza kumanikidza kutenda kwake kuna Trevor.
Noa anomurumbidza nekuda kwehunhu hwakanaka mukumurera somuKristu kunyangwe achinja mukutenda. Trevor ndiye mumwe wevakakurumbira vechiKristu vakakurumbira.
Trevor Noah Chokwadi:
Chokwadi # 1 - Nei Trevor Noah Achida Kudanana naKardashian:
Kamwe paThe Ellen DeGeneres ratidza kutamba uchitamba mutambo unonzi "Who Who You You m'malo," tarisa! Akairega ichitsvedza kuti angafarire kufambidzana naKardashian.
"Ndingadai ndaida kugara ndichidanana naKardashian, kwevhiki chete," akadaro achiseka pamwe naEllen. Kunyangwe hazvo Ellen airatidza kuti anozvitora zvakanyanya.
Chokwadi # 2 - Akanaka Akanaka Ballroom Mutambi:
Trevor Noah akakwikwidza mumwaka wechina (4) weakakurumbira epasirose franchise Strictly Huya Kutamba, inozivikanwa muUnited States seKutamba neNyeredzi.
Sekureva kwaNoa, aive nerudo nekutamba kwechiLatin, asi hwaive hunyanzvi hwake hwekukwikwidza bhora hwakafadza vatongi.
Chokwadi # 3 - Akarwa ne lousy acne achiri kuyaruka:
Noah aive nekuzvishingisa kwakadaro paakange achiri mwana izvo zvinoita kuti anyadziswe abve pamamera. Acne yakaipa yaireva kuti aipedza nguva yake yakawanda achiedza kuti asava munzira paakakura.
Chokwadi # 4 - Akarova mamirioni evaoni muvhiki rimwe chete:
Muna Chivabvu 2019, Zuva Rekuratidzwa naTrevor Noah raive nevhiki rakanakisa rakateedzera, paine rekodhi yemiriyoni imwe yekutarisa kuona.
Chokwadi # 5 - Wakambopedza vhiki mujeri:
Noah akatora mota isina basa kubva kumusangano wababa vake vokurera ndokusimuka, asi akamhanyiswa nemapurisa.
Vakaona kuti kunyoreswa kwemotokari kwanga kusingaenderane nemarezinesi emota, saka vakamusunga, vachifunga kuti aityaira mota yakabiwa. Noah akaiswa mutirongo kwevhiki uye akazoburitswa nebhaari.
Chokwadi # 6 - Akanyepedzera kunge ari Albino achiri kukura:
Trevor nemhuri yake vaifanirwa kunyepedzera kuti aive albino kutsanangura ganda rake remwenje uye kumudzivirira kuti arege kuchinjwazve neHurumende yeRusarura uye kuparadzaniswa nemhuri yake.
Chokwadi # 7 - Zita rake 'Trevor' harina zvarinoreva:
Tsika yechiXhosa inotsanangura mazita nenzira dzakananga. Amai vake vanonzi Nombuyiselo,
semuenzaniso, zvinoreva kuti "Iye Anodzosera." Asi Trevor zvinorevei?
Hapana; amai vake vakasarudzika vakasarudza zita raive risina zvarinoreva kuti mwanakomana wavo asazoguma uye ave akasununguka kuita chero chaanoda.
Trevor Noah Bio Dhata
Zita rizere: Trevor Noah
Zuva rekuzvarwa: 20th zuva raFebruary 1984
Nzvimbo yekuzvarirwa: Soweto, Johannesburg, South Africa
Baba: Robert Noah
Amai: Patricia Nombuyiselo Noah
Ambuya: Nomalizo Frances Noah
Baba vokurera: Abel Ngisaveni Shigange
Dzidzo: Maryland College Primary Chikoro uye Sandringham High School
Hobbies: Kuteerera mimhanzi, Nhabvu, Kutamba, kutora mifananidzo uye kuita kuti vanhu vaseke.
kukwirira: 5 ft 11 / 1.81 m
Basa: Comedian, Mutauri wezvematongerwo enyika uye mupi wepaTV.
Languages: Chirungu, chiGerman, chiShona, chiSotho, chiSuthu neAfrikana.
Net Worth: $ 40 miriyoni USD
Muhoro: $ 28 miriyoni USD pagore
Social Media: @trevornoah (Twitter uye Instagram), @Trevor Noah (Facebook)
Kutenderedza kumusoro kwaTrevor Noah Biography uye Yehucheche Nyaya, tinosvika pakuona mhedzisiro yeKufunga Kupfuura Yako Mamiriro ezvinhu.
Kunyangwe rusaruraganda rakaita kuti hupenyu hurege kutsungirira kune vatema muSouth Africa, amai vaNoa vane tariro, Patricia, havana kurega kudzvinyirirwa kuchimutadzisa kuratidza mwanakomana wavo "zviitiko zvakaitirwa vachena."
Zvakakwana nguva ino, Trevor achiri anoremekedzwa kwazvo pasirese - kunyangwe muAmerica uyo Mutapi wenhau wegore ra2020 akabatsira kuzvitsanangurira nyika yacho.
Isu tinotarisira kuti iwe wakawana ichi nyora kudziya kwemoyo nekuvhenekera zvakare. Ita zvakanaka kugovera ruzivo rwako nesu. Isu tinokuvimbisa iwe zvimwe zvebhayaroji chokwadi nepamusoro-notch chokwadi uye kurongeka; kunaya, uya kupenya. Gara wakabatana!